Maxaa sababay in ay dad badan ka qaxaan Nairobi ka hor doorashada ? - BBC News Somali
Image caption Dad badan ayaa ka qaxaya caasimadda doorashada ka hor
"Maanta dadkii wax naga iibsanayay waxaa ka mid ahaa qof iibsaday 10 xabbo oo saabuun ah, taasina waa wax kheyru caadi ah" ayay tiri Margaret Wanbui oo maamule ka ah dukaan weyn oo ku yaala xaafadda Kawangware oo ah meel dadku iska dageen oo ku taala duleedka waqooyi ee Nairobi.
Inkasta oo suuq fiican jiro, haddana gabadhani waxa ay sheegtey in maamulka dukaankani uu todobaadyo ka hor gaaray go'aan ah in aysan la dagin wax badeeco ah oo cusub, cabsi laga qabo rabshado dhaca iyo qasaara dhasha awgiis.
Image caption Doorashadii 2007 ayaa waxaa ka dhacay rabshado dad badan ku dhinteen
Waxaa ciwaan looga dhigey "The Silent Panic in Kenya" oo micnaheedu yahay "Hanfariirka shanqarta yar ee Kenya".
"Aniga waxaan usoo joogay afgambigii 1982-dii, dhibaato ayaanan kala kulanay, waxayna ila tahay in aan la qabsano xaaladda, nolosheenana halkeedii kasii wadano" ayuu u sheegey BBC-da.
Madaxweynaha Kenya oo digniin u diray garsoorka dalka
Image caption Uhuru Kenyatta waxa uu tartamayaa markii labaad in uu madaxweyne noqdo
Hadalo Hanjabaad ah
"Waan shaqaysan lahaa maalinta doorashada haddii dowladda aysan ku dhawaaqi lahayn in ay tahay maalin fasax, maalinta xigtana qorshahayga waa in aan sii wataa hawsheyda".
Image caption Raila Odinga ayaa ku guuldaraystey in uu madaxweyne noqdo sedex mar oo hore
Nin kale oo ay la hadashay BBC-da ayaa sheegey in uu kaliya awoodo in uu soo iibsado raashiin ku filan sedex maalmood. "Waan jeclaan lahaa in aan soo iibsado raashiin kayd ah oo badan, haddii aan haysan lahaa lacag" ayuu yiri David Kadondi.
"Msando waxa uu fure u ahaa in doorashada ay noqoto mid xalaal ah, balse meesha ayay ka saareen, qaabka loo dileyna waxa ay muujineysaa in ujeedku ahaa in loo dhoco habka doorashada, kadibna lagu shubto" ayuu yiri ninkan.
Booliiska Kenya ayaa wali baaritaan ku haya dilka Msando oo lala diley haweeney da' yar.
Image caption Suuq fiican ayuu heley dukaanka ay ka shaqayso Ms Wambui